aurinkolasi emoji merkitys
Emojis inzira yakanaka yekutaura zvaunofunga uye manzwiro ako kune mumwe munhu usingashandisi mazwi. Uyezve, ivo vanokuchengetedza iwe zvakanyanya basa uye nguva. Mazuva ano, kana iwe ukatumira munhu meseji ine mameseji akajeka, vanogona kufunga kuti unovatsamwira kana kuvatsamwira. Kunyanya kana iri shamwari yepedyo.
Iwe wakamboshandisa emojis zvisati zvaitika, mune mameseji mameseji kana mune imwe yemagariro media ekushandisa. Paunenge usingakwanisi kunyatsoita senge uchiisa pfungwa dzako mumashoko kana kungoita kuti mumwe munhu afarire. Asi Snapchat emojis imwe nyaya yakasiyana. Kana iwe uri mutsva kuApp, unogona kuwana ivo panzvimbo pekuvhiringidza. Iwo akawanda akanyanya-chinangwa pane pane mamwe mapuratifomu uye anoshandiswa zvinopfuura kungoburitsa zvaunonzwa mumagwaro.
Semuenzaniso, iwe unogona kutaurira kuti uri padyo sei nemushandisi nekutarisa Snapchat emoji uye iwe unogona kunyange gadzira yako emoji (kana bitmoji) pane app.
Ngativei nekutarisa izvo Snapchat emojis zvinoreva uye kuti iwe unogona sei kunzwisisa zviri nani uye kushandisa ivo.
Zvinorevei Snapchat Emojis Zvinorevei?
Saka chii chakasiyana nezve Snapchat emojis? Chinhu chikuru ndechekuti, haungovashandise iwo mune zvinyorwa, asi panzvimbo pezvo unogona kuzviverengera kuti unzwisise hukama hwako neshamwari dzako dzeSnapchat.
Iyo emojis pane app inoshandiswa kutevedzera zviitiko zveese iwe neshamwari dzako. Zvinogona kusekwa zvese pamawoko uye zvakazvimirira. Kana Snapchat inopa yako chat emoji, iwo masiter avanotarisa anosanganisira huwandu hwe snaps iwe unotumira kune mumwe, uye kangani iwe unopindura kune mumwe neumwe mameseji.
Ngatione kuti chii iwe chaunogona kudzidza kubva kungotarisa kwako kwakagoverwa Snapchat emoji. Kuti uone emoji, vhura yako Snapchat mbiri uye uende kune Friends chikamu.
Chiso chemwana chakanakisa emoji. Zvinoreva kuti uyu mushandisi uye iwe uchangobva kuve shamwari paapp.
Birthday keke zvakare zvakare nyore kuverenga. Zvinoreva kuti nhasi izuva reshamwari yako. Ziva kuti haisi kuzowoneka kunze kwekunge vabatanidza zuva ravo rekuzvarwa pafaira ravo.
Haasi munhu wese anofarira kugovera rudzi irworwo rweruzivo pamasocial network. Tinokurudzira kudzidza iyo mazano ekuvanzika a Snapchat usati watanga kushandisa iyo app.
# 1 Shamwari Dzakanaka Emoji
Iye zvino ngatitarise kune ese akasiyana emojis emoyo pane iyo app. Chekutanga moyo wakapfava wera. Kana iwe ukaona iyo iri padyo pazita reshamwari yako, zvinoreva kuti iwe uri mumwe nemumwe Shamwari Dzakanakisa pane Snapchat. Zvinoreva kuti uri pamusoro pemumwe neumwe mazita edhisheni. Ndiye munhu waunotumira uye ugamuchire iyo Snaps yakawanda kubva.
Kana iwe ukaona iyo yero njanji padivi pezita reshamwari yako ichitendeuka kuti itsvuku, zvinoreva kuti imi vaviri masvika padanho nyowani rekutaurirana kweSnapchat. Mwoyo mutsvuku emoji unoratidza kuti mushandisi ave ari Shamwari yako yepamoyo papuratifomu kwemavhiki anopfuura maviri.
Ehe, pane kukwidziridzwa kunyange kwechimiro cheBFF. Iwe unogona kuve Super BFFs paSnapchat kana iwe neshamwari yako muchichengetedza chimiro chenyu cheBFF (moyo mutsvuku) kwenguva yakareba kupfuura mwedzi miviri. Ipapo iwe uchaona dzinoverengeka dzemwoyo yepink padivi peiyo yekubata's username.
Shamwari Dzakanakisisa Emoji
Kune akasiyana akanyemwerera akatarisana Snapchat emojis. Dzese dzese dzinoshandiswa kuona hukama hwako nevashandisi vauri padyo navo paapp.
Chiso chakapusa kunyemwerera chinoreva kuti iwe nemushandisi muri shamwari dzeMumwe neumwe. Imi vaviri munotumira manhamba mazhinji kubva kune mumwe. Izvi emoji zvakare zvinoreva kuti paunenge usiri pamusoro peshamwari shamwari yako mazita, iwe uri pamusoro pavo masere.
Mutual Shamwari Shamwari Emoji
Saka ndipo panotangira kunyengera. Chiso chinonyemwerera chine magirazi pane chinoratidza kuti mumwe munhu kubva kune yako Shamwari Shamwari rondedzero iri pane yemushandisi Yemhando Shamwari runyorwa. Chaizvoizvo, iwe une mushandisi mushandisi iyo iwe unotumira yakawanda Snaps kune.
Iyo emoji iyo ine smirk pane kunyemwerera pane iyo inoonekwa kana iwe uri pane yemushandisi YeShamwari Shamwari zvinyorwa ivo vasiri vako. Zvinoitika kana mushandisi akakutumira iwe kazhinji uye kazhinji kazhinji Snaps kupfuura iwe wavatumira.
Iyi yekunyemwerera kunyemwerera emoji iripo kuti ndikuudze kuti yako # 1 Shamwari yepamusoro paSnapchat zvakare iri mushandisi # 1 Shamwari yepamusoro. Imi vaviri mune hukama hwakasimba nemunhu mumwe chete.
Paunochinjanisa Snaps nemumwe mushandisi kwemazuva akati wandei mumutsara, uchaona moto emoji padivi pezita reshamwari iyi. Inonzi Snapstreak. Kana iwe uchida kuenderera mberi ne Snapstreak, iwe unofanirwa kutaurirana ne Snaps chete. Mharidzo hadziverenge.
Iyo yakareba iwe yaunoenda, iyo yakawanda emojis iwe uchaona padyo pazita reshamwari yako, imwe neimwe inoratidza imwe inotaura nezve streak. Paunosvika mazuva zana 'Snapstreak, iwe uchaona zvichichinja kune iyo emoji zana.
Iyo hourglass Snapchat emoji inoratidza kuti iwe unoda kutumira Snap kune uyu nekukurumidza sezvinobvira kana iwe uchida kuti Snapstreak ienderere mberi.
Sparkles inoratidza kuti iwe nemushandisi muri kugovera Snapchat group chat pamwechete.
Goridhe Star Emoji
Teerera kune vashandisi vane iyo yegoridhe nyeredzi emoji padivi pezita ravo. Zvinoreva kuti mumwe munhu akapindura Snap yavo mukati memaawa makumi maviri nemana, saka vanogona kunge vaine chimwe chinhu chinonakidza chekugovera.
Mashandisiro Ekushandisa Emojis On Snapchat
Zvese zvataurwa pamusoro apa Snapchat emojis sarudzo dzekusarudzika dzakapihwa kune vese vanobatika pane yako shamwari rondedzero. Iwe unogona zvakare kuseta yako yega emojis kune vamwe vashandisi. Izvo zvinokwanisika chete neshamwari idzo dzinotova neAshamwari Emojis akagoverwa kwavari naSnapchat.
Kugadzirisa shamwari yako emojis, tevera matanho aya:
Vhura yako Snapchat mbiri.
Kune Android, pikisa pasi uye uwane Sarudza Emojis.
Kune iOS, pira pasi uye uwane Zvimwe Services > Manage > Shamwari Emojis.
Nenzira iyoyo, iwe unogona kushandura shamwari yako yepamoyo emoji kuita pizza pizi. Yakakwana iyo yakakosha pizza shamwari yako.
Kunyangwe iwe uchishandisa Snapchat kubatana neshamwari kana kuti dzora pakushandisa kwewebhu vana vako, zvakanaka kuziva nezve izvo imwe neimwe yeSyapchat emojis inomira. Iyo yakanaka nzira yekutevera yako kubatana pane lokusebenza uye ona kana iwe wakamborega vamwe vashandisi uye wotanga kuve mukuwedzera vamwe.